(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂ဝ၁၇
(အတွေးအမြင် နုိုဝင်ဘာ ၂ဝ၁၇)
(ဒီဆောင်းပါးကုို ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသူများ (၂) လို့ အမည်တပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသူများ အမည်တပ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်က Jeffrey Sachs ရေးသားသော The End of Poverty စာအုပ်နိဒါန်း (အဆိုတော် ဘုိုနုို (Bono) ရေး) တာကို ဘာသာပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။)
● မင်းအိပ်မက်က ဘာလဲ ?
ဒီမေးခွန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့တေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့လူတန်းစားတရပ်ကုို မေးလုိုက်တာပါ။ သည် တော့ မေးခွန်းက သူတို့အတွက် ရယ်စရာကောင်းနေလား။ သူတို့ကုို ဘယ်လုိုအလုပ်မျိုးကုို စတင်လုပ်ချင်သလဲလို့မေးပြီး အလုပ်အကုိုင်တစ်ခုခုပေးပြီး သူတို့ဆီက ဘယ်လုိုမျော်လင့်ချက်ထားကြမလဲ။
၁၉၇၉ ခုနှစ် မှာ Trickle Up ပရုိုဂရမ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နုိုင်ငံသား မုိုင်းဒရပ်နဲ့ဂလန်လိသ် (Mildred and Glen Leet) တို့စုံတွဲက တုိုင်းပြည် ၉၉ နုိုင်ငံမှာ အကြိမ်ပေါင်း ၇ဝဝဝ မက အဲဒီ မေးခွန်းတွေကုို မေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖုို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တတွေက ဆင်းရဲသားတွေအပြင် စာမတတ်ပေမတတ် လူတန်းစားတွေကုိုတောင် တွေ့ပြီး အဖြေ ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လိသ်ဟာ ကာရီဘီရန်အရပ်က အဆင်းရဲဆုံး ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒုိုမီနီကာကုိုခရီးထွက်ခဲ့စဉ်မှာ Trickle Up မွေးဖွားလာဖုို့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
''ကျွန်တော်တို့က မတူညီတဲ့လုပ်ငန်း ၁ဝဝ အတွက် ဒေါ်လာ ၁ဝဝ သုံးခဲ့တယ်။ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ဒီထက်မက တန်ဖုိုးရှိတယ်။ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရပါဘူး။'' ဂလန်လိသ်က ဆက်ပြောရာမှာ ''ကာရီဘီရမ်အရပ်က ဒုိုမီနီကာဆုိုတဲ့ ကျွန်းလေး တစ်ကျွန်းကို စစချင်းတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုတော့ အဲသည်နေရာမှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ သိပ်ကုို ထူထပ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကလည်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်လောက်ပဲ ရှိတယ်။''
အဲဒီမှာ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကုို ကူညီပေးမယ့် ပရုိုဂရမ်တွေ ဘာမှမရှိဘူး။ သူတို့က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ စခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ကိုယ်ပုိုင် ပုိုက်ဆံ ဒေါ်လာ ၁ဝဝ နဲ့ လူ ၁ဝ ယောက်စီကုိုပေးပြီး ကိုယ်ပုိုင်အလုပ်လေး စလုပ်ခုိုင်းခဲ့ကြတယ်။ ကြက်ဥ၊ ယုိုနဲ့ ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းဖုို့စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲသည်အလုပ်လေးက ယနေ့တုိုင် တည်တန့်နေတယ်။ ပြောရရင် ရလဒ်တွေက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် တုိုးတက်လာတယ်ပေါ့။ အခု Trickle Up အကြောင်းလေးကုို အစပြန်ဖော်ကြည့်ပါမယ်။
Trickle Up ဆုိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ရဲ့ နောက်မှာ လက်တွေ့ကျတဲ့သီအုိုရီ တစ်ခုရှိနေတယ်။ ''လူတစ်ယောက်ကုို ငါးတစ်ကောင်ပေးပြီး ထမင်းတနပ်ကျွေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဘဝနေထုိုင်စားသောက်ဖုို့ ငါးများနည်း သင်ပေးမလား'' တဲ့။ လိသ်က ''လူတုိုင်း လူတုိုင်းမှာ'' တဲ့၊ ''ဘယ်လုိုပဲ အဖိနှိပ်ခံနေရပါစေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝအိပ်မက်တွေနဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖုို့ ချန်ပီ ယံ ဖြစ်ဖုို့ အခွင့်အရေးရရင်လုပ်မှာပဲ ဆုိုတဲ့ အိပ်မက်တွေ ရှိနေကြပါတယ်” လို့ပြောတယ်။
Trickle Up ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ကြည့်လုိုက်တော့ ''အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်မယူပဲ လူ့ဘဝကောင်းမွန်တုိုး တက်ဖုို့ လုပ်ဆောင်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်း'' လို့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက အလွန့် အလွန် ဆင်းရဲမွဲတေ ပါတယ်ဆုိုတဲ့သူတွေကုို အဓိကပစ်မှတ်ထားပါတယ်။ - သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဆုိုတာ တစ်နေ့ကုို ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာအောက် (၁.၉ ဒေါ်လာ) လောက်ပဲ ဝင်ငွေရှိတဲ့သူတွေ - ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ စစချင်းမှာတော့ အားနွဲ့တဲ့ အမျိူးသမီးတွေ၊ ကုိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းနေတဲ့သူတေနဲ့ အမေရိက၊ အာဖရိကနဲ့အိန္ဒိယက ခုိုလှုသူတွေဆီ ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ အတိ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ အစုိုးရရေးဆွဲတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ဖုို့တောင်မှ အလှမ်းဝေးနေသူ တွေဖြစ်ပြီး NGO (Non-government Organization) ဆုိုတဲ့ ''အစုိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း'' တွေနဲ့လည်း ဘယ်လုိုမှ မ တွေ့နုိုင်တဲ့ မဆုံဆည်းနုိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
United Nations Relief and Rehabilitation Agency (ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဆုိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အေဂျင်စီ) မှာ သူ့ဘဝတလျောက်လုံး လုပ်ကုိုင်ခဲ့တဲ့ ကာလတလျောက်လုံးမှာ ကမ္ဘာအနှံ့က တုိုင်းပြည်ပေါင်း ၅ဝနုိုင်ငံ ကုိုခရီးထွက်ပြီး လူတွေရဲ့ ဘဝတွေကုို လေ့လာစမ်းစစ်ပြီး အဖြေတစ်ခုထုတ်နုိုင်ဖုို့ မျော်လင့်ချက်တေနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝနှစ်လောက်က မုိုင်းလ်ဒရပ်နဲ့သူ (လိသ်) တို့နှစ်ဦးသားဟာ ''အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညိမ်းချမ်းရေး အဆင့်မြင့် ကော်မတီ'' ရဲ့ နောက်ခံနဲ့ကြီးမားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကုို ချမှတ်ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့က ပုိုက်ဆံမရှိ၊ ဆင်းရဲတဲ့လူတန်းစားတွေကုို တွေ့တယ်၊ မေးခွန်းတွေမေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ကဘာလဲလို့ ဖြေခုိုင်းကြည့် တယ်၊ သူတို့လက်ထဲ ပုိုက်ဆံထည့်ပြီး ဒါဟာ တကယ်ကူညီတာ၊ ဟန်ဆောင်မေးနေတာမဟုတ်ဖူးလို့ သက်သေပြခဲ့တယ်။
''ကျွန်တော်တို့က ဒေသဆုိုင်ရာ (ကာရီဘီရန်အရပ်က အဆင်းရဲဆုံး ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒုိုမီနီကာ) အစုိုးရအဖွဲ့တွေ၊ အရာ ရှိတွေနဲ့ တွေ့ပြီး သူတို့နေရာက လူတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်မေးမြန်းကြပါတယ်။ ဒေသခံလူတေနဲ့တွေ့ဆုံမူတွေ မရေတွက်နိုင်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ တချို့က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တုံ့ပြန်ကြတယ်။ တချို့ကတော့ ဟာသတွေ လာလုပ် နေတယ်ဆုိုပြီး စိတ်ဆုိုးကြတယ်။ အဲသည်လုိုလူတွေ ကြားထဲကမှ အနည်းငယ်သော ၁ဝယောက်လောက်သာ ရှိတဲ့ အလုပ် လက်မဲ့၊ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုကုို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကုို မေးကြည့်တယ် -- ''ခင်ဗျား တို့ကုို အလုပ်တစ်ခုခု တစ်ယောက်ယောက်က ပေးမယ်လို့ မျော်လင့်ပြီး စောင့်နေကြတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ ကိုယ့်ဘာ သာကုိုယ် ရောလုပ်ဖုို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလား”
''ဒီမေးခွန်းက သူတို့အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်လည်း ဖြစ်တယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ သူတို့က ဖြေတယ် - ''ကျွန်မတို့လုပ်ချင်တာပေါ့။ ကျွန်မတို့က ဝုိုင်ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်တယ်။ ဘယ်လုိုလုပ်ရမလဲ ဆုိုတာလည်း သိတယ်။'' ဆုိုပြီး အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကောက်ကြောင်းဆွဲပြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့အတွက် ရင်းနှီးငွေ ထုတ်ပေးလုိုက် ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ကုို ဆွဲထုတ်ပေးလုိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်တစ်ခုချုပ်တယ် - လက်မှတ်ထုိုးကြတယ် - သူတို့အတွက်ပုိုက်ဆံ ထုတ်ပေးတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတော့မယ်ဆုိုပြီး ခံစားမိသွားကြတယ်ပေါ့။''
မုိုင်းလ်ဒရက်က ''သူတို့ အခုဆက်လက် အလုပ်လုပ်နေကြဆဲပါပဲ။'' ''အရသာရှိတဲ့ဝုိုင်ကုို သူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နုိုင်ကြ ပြီ၊ ကျွန်မတောင် မြည်းကြည့်တာ တော်တော် ကောင်းတာပဲ။ ''။
သူတို့လုပ်ငန်းမှာ ၃ ပု့ ၂ ပုံက အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂလန်လိသ်က ''ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကုို - ပေါင်မုန့် ကောင်းကောင်းဖုတ်တတ်ရင် ပေါင်မုန့်ဆုိုင်တစ်ဆုိုင်ဖွင့်လုိုက်တော့ - တဲ့။ ဒါမှမဟုတ် - ကောင်းကောင်း အချုပ်အလုပ်တတ်ရင် စီးပွားရေးတစ်ခုခု စတင်လုိုက်တော့ - တဲ့။ အဲဒါ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတာ။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို ''ခင် ဗျားတို့ခေါင်းထဲ ရှိတာ ချရေးလုိုက်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့က ဒေါ်လာ ၅ဝ အရင်းပြုမယ်။ ၃ လကျော်ရင် ခင်ဗျားတို့ရလာတဲ့ အကျိုး အမြတ်ထဲက ၂ဝ ရာခုိုင်နှုန်းကုို ပြန်ပြီးအရင်းအနှီးထပ်လုပ်။ ဒါဆုို ခင်ဗျားတို့ကို နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၅ဝ ထပ်ပေးမယ်'' လို့ပြောလုိုက်တယ်။” မုိုင်းဒရက်က ''ဒီလုိုစပြောလုိုက်တော့ ပထမဦးဆုံးအကြိ်မ် ဆင်းရဲသားတွေဟာ သေသေချာချာ အာရုံ စုိုက်ပြီး နားထောင်လာတယ်၊ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ၅ဝ ဒေါ်လာ နဲ့အလုပ်စလုပ်မယ်။ ဒါဟာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပဲ''
''စစချင်းမှာတော့ သူတို့ကုိုယ်ပုိုင် စီမံကိန်းနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့။ အမေရိကန်က စီးပွားရေးသမားတွေ စီးပွားရေး စလုပ်တဲ့ သူ တွေလုိုပေါ့ဗျာ။'' ဂလန်က ဆက်ပြောတယ်။'' ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်ပဲ အကြမ်းအားဖြင့် သွားနေတယ်။ သူ တို့ဆွဲထားတဲ့အတုိုင်းဖြစ်မလာရင် တစ်ဝက်လောက်မှာ နောက်တစ်ခုကို စလုပ်ဖုို့ အကြံပေးလုိုက်ပါတယ်။'' ''ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆုိုတော့ သူတို့မှာ ဒီအတုိုင်း ဆက်လက်သွားနေဖုို့ အတွေ့အကြုံတို့၊ ဘာတို့ ယူဖုို့ အချိန်သိပ်ပေးလို့မရဘူးလေ။ မျော်လင့် ချက်တို့၊ မုိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ ကံကောင်းမှုတို့ကို စောင့်နေလို့မရဘူးဗျ။''
သူတို့ စတင်လမ်းခင်းပေးတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ ဆုိုင်သေးသေးလေး စဖွင့်တာ၊ ကြက်နဲ့ဆိတ်တွေ ရောင်းခုိုင်းတာ၊ အဝတ်အထည်တွေကုို ဒေသဆုိုင်ရာဈေးမှာ နေရာရှာပေးပြီး တင်ရောင်းခုိုင်းတာတွေပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုိုက်ဆံကုို ဘယ် လုို စုဆောင်းရမယ်၊ အကြွေးကုို ဘယ်လုိုယူပြီး ကိုယ်ပုိုင်အရည်အချင်းနဲ့တုိုးပွားအောင် ဘယ်လုိုလုပ်သင့်တယ်၊ အနာဂတ်အ တွက် အစီအစဉ်ဆွဲတတ်ဖို့ စသဖြင့် ရှင်းပြသင်ကြားပေးကြပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ် ယုံကြည်မူရှိဖုို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။
သူတို့လုပ်ငန်းတွေဟာ United Nation ‘s Development Forum magazine (ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဆုိုင်ရာ တုိုးတက်ရေး ဆုိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ) မဂ္ဂဇင်းမှာ Trickle Up အကြောင်းတွေ ဆောင်းပါးတွေ ပါလာတော့ပုိုပြီး လူတွေ အာရုံစုိုက်မိလာပါတယ်။ ချက်ချင်းလက်ငင်းကုို မီဒီယာတွေက စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မူတွေကုို လူတွေ သိချင်လာကြတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ကမ်းလှမ်းလာတာတွေ၊ ဒီအလုပ်ကုို လှူချင်တမ်းချင်တာတွေ ထိဖြစ်လာတယ်။ မုိုင်းဒရပ်က ''ကျွန်မတို့ မူလအစမှာ ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ နဲ့ စလှူခဲ့ကြတာပါ'' လို့ပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ ''နောက်တော့ UN (United Nation) (ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ) က ဒေါ်လာ ၇ဝဝဝထည့်ဝင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် အကျိုးပြုပေးခဲ့တာ ဒေါ်လာ ၇ သောင်းခွဲလောက် ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မနှစ်ကဆုို နယ်သာလန်က လုပ်ငန်းတစ်ခုက ၄ နှစ်စီမံကိန်းအတွင်း ဒေါ်လာ ၆ သောင်း ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်တွေကြာလာလေ၊ ပုိုပြီး လုပ်ငန်းက ကြီးထွားလာလေ၊ အမြတ်များများရလေ ပေါ့။ စစချင်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့စပေးခဲ့ရာကနေ ခုဆို ၂ ဆ ပြန်ရတယ်။''
ဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၅ သောင်းနဲ့လူတွေကုို လုပ်ငန်းတွေ စတင်ပေးခဲ့တာ လာမယ့်နှစ်အနာဂတ်မှာ ဒေါ်လာ ၁ သန်းရမယ်လို့ လိသ်က မျော်လင့်နေပါတယ်။
Trickle Up က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မုိုင်းဒရပ်က ''နယူးယောက်ရဲ့အဆင်းရဲဆုံး နေရာလေးတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်း ၄ဝ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆုိုရင် မြင်တဲ့အတုိုင်းပဲလေ - ၂ဆ ၂ဆ ရနေပြီ။ ဒါဟာ ပထမတစ်နှစ် စာလောက်လေး တွက်ပြတာပါ။ ဒိအရင်စခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေဆုို ပြောမပြတတ်လောက်အောင် အောင်မြင်နေပါပြီ။ ဒိထက်မ က ပြောစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။''
''အင်း… ကျွန်တော်တို့ကတော့ မီဒီယာကုို သည်လူတေနဲ့ ပေးမတွေ့စေချင်ဘူး။ သည်လုိုလုပ်လုိုက်တာဟာ သူတို့လေးတွေ ရဲ့ ရှေ့ရေးကိုဖျက်စီးပစ်ရာရောက်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် အကူအညီလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ အစုိုးရ ဝါဒဖြန့်တဲ့ ပုံစံမြင်ရပါများ ရင် ယုံကြည်မူကင်းမဲ့သွားမှာကုို စုိုးရိမ်ပါတယ်။ ခနတော့ စတားတွေ ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေ။ ဒါဟာ သူတို့အတွက် ရှေ့အလား အလာ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။''
မုိုင်းဒရက် က ''ဒေါ်လာ ၅ဝတို့ ၊ ၅ဒေါ်လာတို့ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာ လူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကုို ဖွင့်ပေးလုိုက်ဖုို့ သာ အဓိကပါ။ သူတို့အတွက် လေးစားမူနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ရရှိခံစားပေးလုိုက်ခြင်းသာလျင် လုပ်ငန်းရဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါ တယ်။''
၁၉၇၉ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Trickle Up ဟာ အမျိုးသမီး ၂ သိန်းခွဲကုို ကူညီပေးနုိုင်ခဲ့ပြီး မိသားစုတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ် ယုံကြည်မူ၊ အလုပ်ကျွမ်းကျင်မူတေနဲ့ စီးပွားရေးအလုပ်တွေ ပုိုင်နုိုင်သွားစေယုံမက လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ပါ ကျယ်ပြန့် လာစေခဲ့ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ - အမျိုးသမီးတွေ အောင်မြင်ရင် သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ မိသားစုတွေပါ ပါလာပြီပေါ့။ ပထမ ၃၇နှစ်အတွင်းမှာ လူပေါင်း ၁ သန်းရဲ့ဘဝတွေကုို ကယ်တင်ပေးနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုဆုိုရင် Trickle Upဟာ အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်နုိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ဟာ လုပ်ငန်းတွင်းသင်တန်းများပေးတယ်၊ ကျွမ်းကျင်ဖုို့ ကွင်းဆင်းလုပ်ကြရပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်တွေကုို ချပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Trickle Up ဟာ မိမိတို့နေထုိုင်ကြတဲ့ မြို့ရွာက လူတွေအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လာအောင် ကြိုးစား ချင်စိတ်ရှိလာအောင် အားပေးကြတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဆင်းရဲတာဟာ ပုိုက်ဆံမရှိလို့မဟုတ်လား။ ဒါကုို ဖြည့်ပေးဖုို့ဆုိုရင် တကယ့်ကုို သူတို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာဖုို့လည်း လုိုတယ်လေ။
Trickle Up က နောက်လာမယ့် သက္ကရာဇ် ၂ဝ၃ဝ မှာ တကမ္ဘာလုံးဆုိုင်ရာ ဆင်းရဲမွဲတွေမူ ကင်းစင်ဖုို့ မျော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့။ နောက် ၅ နှစ်အတွင်းမှာတောင် အဆင်းရဲဆုံးလူ၁သန်းကုို ထပ်မံကယ်တင်ပေးနုိုင်မယ်လို့ ကြွေးကျော်ထားပါတယ်။ အ ကယ်၍များ သူတို့မှန်းထားတဲ့အတုိုင်းများဖြစ်ခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့ Trickle Up ဟာ တကမ္ဘာလုံးက အာရုံစုိုက်လာပြီး သူတို့လုပ်ငန်း ကုိုလည်း သည့်ထက်တုိုးချဲ့လာနုိုင်၊ အောင်မြင်လာနုိုင်ပြီးတော့ ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေဆီကုို ဒိထက်မက ပုိုပြီးရောက်ရှိ ပြန့်နှံ့ သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
REF : 1989 June American Newsletter, Sherrey Henry’s What is your dream? ကုို မှီငြမ်းဘာသာပြန်ထားကာ Trickle Up Wiki မှအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။
Articles Junior WIn